Indonesia in Focus: Soon Sunnah wuxuu siiyaa xigmad.
Soon Sunnah wuxuu siiyaa xigmad.
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (316)
(Qaybta saddex boqol iyo toban), Depok, West Java, Indonesia, July 19, 2015, 23:02:00 GMT)
Waxaan leeyahay saaxiibbo, deriska soo socda si uu guriga u, waxaan ku noolaa albaabka isaga ku xigtayna waxaa qiyaastii 30 sano, waxaa jira caado uu sheegay in uu ku sameeyay tan iyo markii uu dhalinyarada, kuwaas oo Soon Nabiga Daawuud, sida sunnada sooman, soon hal maalin, maalinta ku xigta ma sooman.
Tan uu ku sameeyey ilaa da'da uu haatan ku saabsan yahay 70 sano, xilligaas oo ay isaga deriskayga, ayuu dhif buka, ugu uu abid daryeelo isbitaalka dhowr sano ka hor ay sabab u tahay qandho dengue.
Ka dib markii uu weligii buka ilaa hadda, jidhkiisa da 'ah oo 70 sano u muuqdaan taam ah oo caafimaad qaba, xitaa marka ay jiraan shaqo wanaagsan ee dhismaha masaajidka iskaashiga labada dhinac ee xaafad la deggan yahay, ama bullaacadda lagu nadiifiyo (bulaacadaha) AAU shaqo kale oo iskaa wax u qabso uu qayb jir ahaan.
Tani caafimaad buuxa oo lagayaabo in ay ka penchant Daawuud sunnah soon ama sababta oo salaadda sii wadaan inay jimicsi salaadda iyo fiidkii salaad kasta khasab ah.
Nabiga sallallaahu 'wa ayaa ku dooday in ay si degdeg ah maalmaha soo socda:
a. Lix maalmood waa in Shawwal
Waxaa la Qisadii Abu Ayyub al-Ansari Radi anhu, in Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
Ku alla kii soomanaa Ramadan oo markaas ku xiga Soonka lixda maalmood ee Shawwal, markaas isagu waa sida degdeg ah sano ah. "
b, c. Maalinta Carafa loogu kuwa aan u adkeeyo Xajka iyo maalinta 'caashuuraa (maalinteedii tobnaad oo Hijjah) iyo maalintii hore (maalinta sagaalaad).
Waxaa la Qisadii Abu Qatadah Radi anhu, isna wuxuu ku yidhi,
"Nabiga sallallaahu 'wa laga weydiiyay Soon maalinta Carafa, waxa uu ku jawaabay," Waxay ka qaada dembiyadii sanadkii la soo dhaafay iyo in u iman doonaa. "Waxa uu sidoo kale wax laga weydiiyay Soon maalinta Dembiyadaadu caashuuraa, waxa uu ku jawaabay," Waxa uu ka qaaday sano dembiga ka hor. '"
Umm al-Fadl al-Harith bintu Radi anhuma in ay jireen dad ka mid ah kuwo ku hareeraysan ay waqtiga ku Carafa waa nalooguma oo ku saabsan soonka Nabiga sallallaahu 'wa in ay Carafa. Waxaa jira qaar ka mid ah ku doodayaan in uu soomay iyo kuwa kale qaar ka mid ah ayaa sheegaya in uu yeelay uma Soomin Ruuxa, ka dibna Nabiga sallallaahu 'wa u dhiibay galaas oo caano ah, ka dibna uu ku jiray oo uu geelu at' Arafat, oo wuxuu ku cabbeen. 
Sidoo kale Qisadii Abu Ghathfan bin Tharif al-Muri, ayuu yiri, "waxaan maqlay Ibn 'Abbaas anhuma yiri," Markii Nabiga sallallaahu' wa soomay 'caashuuraa oo wuxuu ku dooday in isaga saaxiibbadiis ah in si degdeg ah, oo waxay ku yidhaahdeen,' O Rasuulka Alle, kani waa maalintii in la maamuuso by Yuhuud iyo Nasaara. 'Markaasuu wuxuu ku yidhi, Si wanaagsan baad markaas, in sannadka soo socda waxaan soomi maalinta sagaalaad (tasu'a) Insha Allah. "doona Ibn" ayuu yiri Abbas,' laakiin aan ilaa sanadka soo socda, Nabiga sallallaahu 'wa ayaa dhintay.' "
d. Maalmaha ugu soonka bisha Hijjah
Laga soo bilaabo Abuu Hureyrah Radi anhu, ayuu yiri, "Nebigu sallallaahu 'wa yiri:
"Ugu wanaagsan ee soonka ka dib bisha soonka Ramadaan la sooman bisha Eebe, Hijjah iyo sida ugu fiican ee salaadda ka dib markii ay salaadda ee qasabka ah waa Taraawiixda." 
e. Maalmaha ugu soonka bisha Shacbaan
Of 'Aisha Radi anhuma, ayuu yiri, "Waxaan marnaba arkay Nabiga sallallaahu' wa kaamil ah bisha soon bil-dheer ee Ramadaan marka laga reebo iyo Weligay ma arkin isaga Soon ee bil ka badan bil Shacbaan." 
f. Isniinta iyo Khamiista
Waxa laga weriyey Usama bin Zayd Radi anhuma, isna wuxuu ku yidhi, "Runtii Nabiga sallallaahu 'wa mar walba way soomeen maalmaha Isniinta iyo Khamiista, markii uu weydiiyay waxa ku saabsan, waxa uu ku jawaabay:
'Addoon Runtii camal wajahnay (Eebe) maalmaha Isniinta iyo Khamiista.' "
g. Soonka saddex maalmood bil kasta (Hijriyyah)
Laga soo bilaabo 'Abdullah bin' Amr Radi anhuma, ayuu yiri, "Nebigu sallallaahu 'wa igu yidhi:
'Your degdeg ah saddex maalmood bil kasta. Illeen ee camalka wanaagsan uducaynaya inuu ku Abaal mariyo, si uu sida waqtiga oo dhan Soonka. '"
Markaasuu disunnahkan inaad maalinta saddex maalmood soddonaad, afar iyo toban, shan iyo toban. Iyada oo ku saleysan taariikhda Abu Dharr Radi anhu, waxa uu sheegay in Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
"O Abu Dharr, haddii aad rabto inaad sooman tahay saddex maalmood bil ah, ka dibna aad soontaan maalinta soddonaad, afar iyo toban, shan iyo toban." 
h. Maalin iyo jebin ay maalin walba si degdeg ah (soon Nabiga Daawuud Alaihissallam)
Waxaa la Qisadii ka Cabdullaah ibn Camar Radi anhuma, in Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
"Soonku waa ugu Ilaah jeclaaday waa soon Nabiga Daawuud, uu soomay maalin iyo maalin jebin." 
i. Maalinta sagaalaad ee bisha Dhul Hijjah
Waxa laga weriyey Hunaidah bin Khalid, ka xaaskiisa, naagaha ugu Nabiga sallallaahu 'wa, ayuu yiri, "Nebigu sallallaahu' wa soomay maalintii sagaalaad oo Dhul Hijjah, maalinta 'caashuuraa, saddex maalmood bil kasta, marka hore Isniinta ee bil iyo Khamiista. "
14. Maalmood ee Soonka Waayo, isaga Reebay
a. Laba Hari Raya ('Ciidul Fitriga iyo' Ciid al-Adha)
From Abu 'Ubaid, Addoon la sii daayey ee Ibn Azhar, ayuu yiri, "Waxaan u dabaal' Id ay weheliyaan Cumar ibn al-Kaththab Radi anhu, de markaas waa inuu (Cumar) wuxuu yiri," Tani waa labo maalin Nabiga sallallaahu 'wa inoo diiday inay sooman yihiin iyada, maalintii meesha aad jebiso soonka iyo maalinta kale, maalintii meesha aad qaadan xayawaanka aad Nicmoolayda ah. "
b. Maalin Tasyriq *
From Abu Murrah, Addoon la sii daayey ee Umm Hani ', in uu la jiray' bin Abdullah 'Amr anhuma Radi soo degay inuu arko Camar ibn al-`As, ka dibna uu cunto u adeegaan oo labaduba, isagoo leh, "Cuna!" Waxa uu ku jawaabay, " Waxaan sooman. "'Amr ayaa sheegay," Cuna, run ahaantii, maanta waa maalintii in Nabiga sallallaahu' wa na faray in ay jebiyaan noo degdeg ah oo iska reebayaan. "Malik ayaa sheegay in," Waxay ahayd Maalintii Tasyriq. "
Qisadii ka 'A'ishah iyo Ibn Cumar Radi anhum, labadooduba sheegay, "Lama oggola in ay soomaan maalmaha tasyriq, marka laga reebo kuwa aan u hesho Xayawaanka Nicmoolayda (ee Mina markii Xajka)." 
c. Soonka on Friday keliya
In uu ku Qisadii Abuu Hureyrah, ayuu yiri, "Waxaan maqlay Rasuulka Shallahu wa yiri:
'Mid aan aad Soon on Friday ha, laakiin waxa uu maanta ka soomay ka hor ama ka dib. "
d. Soonka on Saturday keliya
Iyada oo ku saleysan taariikhda Cabdullaah ibn as-Sulami Bukhaariga Radi anhu, ka walaashiis, ash-Shamma Radi anhuma, in Nabiga sallallaahu Laahu wa dabiiciga ah ayaa yiri:
"Ma soomin Maalin sabti ah, haddii in adiga ayaa laguu qoray, waayo. Haddii nin idinka mid ah oo aan helin (cuntada la jebinayo), marka laga reebo hargahoodii ku canab ah ama laan geed, markaas ha u calaliyo. "
e. Qeybtii labaad ee bisha Shacbaan kuwa aan haysan dabeecadda ah soon
Waxaa la Qisadii Abuu Hureyrah Radi anhu in Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
"Haddii waxa uu kor u ahayd in ay bartamihii bishii Shacbaan, ka dibna aadan soomeen." 
Sidoo kale Abuu Hureyrah Radi anhu, Qisadii in Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
"Ma ee abid aan cid idinka mid ah ka hor bisha Ramadaan by Soomo Maalin ama laba maalmood ka hor, haddii aan qofka ka shaqaynayso soon caadi ah, isaga ha u soomi maalintaas." 
f. Soonka Maalinta shaki
Laga soo bilaabo 'Ammar Radi anhu, ayuu yiri, "Ruuxii la Soomo maalintii oo ka mid ah hab shaki uu ku caasiyeen Abul Qaasim (Nabiga sallallaahu Laahu wa Sallam) ka." 
g. Weligiis Soonka, inkastoo iyada oo aan sameeyey si degdeg ah oo ku saabsan maalmaha mamnuuc in si degdeg ah.
Waxaa la Qisadii ka Cabdullaah ibn Camar Radi anhuma, ayuu yiri, "Nebigu sallallaahu 'wa yiri:
"O" Abdullah bin 'Amr, dhabta ah ee aad had iyo jeer waa si degdeg ah inta lagu jiro maalintii (weligiis) oo aad u hesho ilaa habeenkii. Haddii aad sii wadi, ka dibna waxaad ka dhigtay indhahaaga waa godan oo naftaada ku jirdileen. Soon No la sooman yahay, waayo, dadka weligiis. "
Sidoo kale Qisadii Abu Qatada, waxaa jiray nin u yimid Nabiga sallallaahu 'wa sida uu weydiiyay, "Rasuulkii Eebe sallallaahu' wa Sidee baad u soomi weydaa?" Nebigu sallallaahu 'wa xanaaqsan in la maqlo erayada iyo marka' Umar arkeen, wuxuu yidhi, "Waxaan leenahay Raalli ahaanshaha Eebe siduu Rabbigeenna, Islam sida diinta, iyo Muhammad sida Nabigeena. Waxaan waswaasiye ka magangal Eebe ka xanaaq iyo cadho ah Rasuulkiisa. "Waxa uu hayaa hadalkaas Nabiga soo noqnoqda, sallallaahu 'wa joojin cadhooday, markaas ayuu is weydiiyay," Rasuulkii Eebe sallallaahu' wa waxa ku saabsan qofka sooman weligiisba? " Waxa uu yiri:
"Waxa uu u soomi weydaa iyo ma jebin soonka." 
15. Mamnuucidda Soonka inay naag u noqoto haddii ninku Waxaa jira (at Home) Marka laga reebo ruqsadaha ayaa
Iyada oo ku saleysan taariikhda Abuu Hureyrah Radi anhu, waxa uu sheegay in Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
"Lama oggola in si degdeg ah oo ku saabsan naag markii ninkeeda guriga, marka laga reebo iyadoo uu fasax." 
[Guuriyeen ka kitaabkii Al-Sunnah wal Wajiiz FII Fiqhis Kitaabil Aziiz, Author Shaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Indonesia Guide Duruusta Muhiimka Edition Buuxi, Tarjumaha Kooxda Tashfiyah LIPIA - Jakarta, Ibn Kathir Reader daabacday, oo daabacan 'Ramadan 1428 - September 2007M]
Saddex caabudina Sare End of Ramadan
Sheikh Muhammad ibn Saalax al-Utsamin
Bisha Ramadaan ugu dhakhsaha badan waa idlaan doonaan, ha qiimeeyo, inaannu isku mid kasta oo inaga ah oo ku saabsan in aan sameynay ee Noble this. Bishan markhaati aakhiro oo dhan camal aynu samaynay iyada u noqon doonaa. Goobjoogayaal yaa inaga ama markhaatiyaasha dembi caddayn lahaa meringan. Sidaas aynu ka faa'iideystaan ​​waqtiga ay ka harsan tahay inay dhaqso u toobad keenaan, dambi dhaaf in Alle iyo camal wanaagsan ku tarmeen weydiiso. Waxaa laga yaabaa oo dhan wanaag ah in aan sameeyo ka dib markii uu ogaaday unu kala duwan iyo ceebaha, dabooli kara waxaa dhiman in aynu samaynay maalmaha hore.
Oo wakhtigii hore ee Ramadan, habeen buuxda cibaadada iyo maalin. Inta lagu guda jiro maalinta ka buuxsamay sooman, dhikr, iyo akhriska Quraanka, waxaa loo isticmaalay habeenkaas inuu ku tukado, oo akhriyey Quraanka. Waqtigaas, xaaladda ugu dadka muslimka ah ee dhinaca cibaadada, sida la filayo. Waxay aad ugu faraxsan oo aad u xamaasad isticmaali ilbidhiqsi si ay u Caabudi oo Eebe ka Ilaaha Qaadirka ah. Laakiinse haatan, maalmaha waxaa ka buuxa barakadii waxa ugu dhakhsaha badan waa idlaan doonaan inay naga tegin, laakiin weli wax badan oo aan la isticmaaley si ugu badnaan. Waxaan rajaynaynaa ku ducaysto oo Alle, Alle na siiso oo dhan kartida si loo kordhiyo waqtiga inta hadhay ku helo Raalli ahaanshaha Eebe Ilaaha Qaadirka ah.
Waxaan rajeynayaa inaan ku qori kartaa dhammeeyey in bisha Ramadaan ay tani ku guuleysto dambidhaaf xagga Eebe ka Ilaaha Qaadirka ah, waayo, dembiyadayadii oo dhan ee aynu samaynay, sidoo kale dembiga ama dembiga waxaan ognahay aynaan ogayn.
Waxa aan Alle ka Ilaaha Qaadirka ah in ay aqbalaan, Camalkoodiina oo dhan, oo lacag la'aan ah ka lahaa jahannamada dabka ah, nasiib si ay u awoodaan inay gaaraan Samada iyo macbuudka Qaadirka Nooga keeno waxaa laga yaabaa in dib u Ramadaan ee sanadka soo aadan ee gobolka ka wanaagsan.
Soo afjaridda bisha barakaysan ee Ramadan taas, Alle noo jideeyey xagga qaar ka mid ah Caabuda oo ammaanta lahaa oo ku dari kartaa in Rumaysad noo Eebe Ilaaha Qaadirka ah oo kor loogu qaado kartaa cibaadada iyo dheeraad ah ay dhamaystir u noqonaysaa Nicmada Eebe Ilaaha Qaadirka ah noo. Bareelo caabudina waa sakada Fitr, Id Takbir habeenkii iyo Salaadda.
Fitr ajarkooda waajibay kasta oo Muslim ah. Ajarkooda Fitr ku fula soo saarista SHA '(qiyaastii 3 kg) cuntada caadiga ah, taasoo nadiifisa ama loogu talo galay dadka sooman iyo cuntada ee dadka saboolka ah sida. Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين
Laga soo bilaabo Ibn 'Abbaas anhuma, ayuu yidhi: Rasuulka Alle, sallallaahu'. Wa ayaa loo baahan yahay sadaqad Fitriga loo daahiriyo kuwa degdeg ah ka kiiska in hadal been ah oo aan naxariis lahayn, oo sida cuntada ee dadka saboolka ah 
Taas darteed Fitr Sekadu waa waajib ku ah waxaan oo dhan, haddaba aynu u samayn si sax ah si uu u hogaansamo amarka Eebe Ilaaha Qaadirka ah iyo Rasuulkiisa.
Ha noo soo saari sako ah nafteena iyo kuwa daboolay noo by.
Aynu dooranno dhigtey waxay ahaayeen ugu fiican ee aan awoodno iyo ugu waxtarka badan, sababtoo ah sakada waa mid ka mid sha kaliya 'sanadkii. Oo weliba sababtoo ah ma jirin mid Adduun ogyahay oo balan qaadi karno in uu awood u yeelan doonaan si ay u fuliyaan Zakada mar kale in sanadaha soo socda.
Ma waxaan rabnaa in aan iyo diyaar u yihiin in ay sameeyaan Waayo, qudheenna ayaa haysata saaray warmurtiyeed sako ah walxaha cunto aasaasi ah oo xun ama ka xun waxa aan cunno ama Caaasimadda ah? Jawaabtu, dabcan ma.
Ina keena aynu xamaasad Zako Xajka tan si sax ah, sidii lagu falay kuwii Nabiga sallallaahu 'wa iyo anhum Ehelu Radi ah. Yeynan innaba laydinka dhigay ay dhammaystirmaan by bixinta ama lacag la qarashgareeyo, halkii ay raashin caadiga ah, maxaa yeelay waxa ay weligeed ku sameeyaan Nabiga sallallaahu 'wa iyo saaxiibbadiis ah ka dib markii uu sallallaahu' wa, oo ay ahayd dhexdhexaad ah sarrifka in ay la mid tahay lacagta ee hadda jira , laakiinse iyagu ma ay bixiyaan sako Fitr Diinaar oo dirham in ay haystaan. Waxa ay muujinaysaa ma aha disyari'atkan.
Ruuxii Zakada adigoo isticmaalaya lacag, halkii ay raashin caadiga ah, ka dibna sakada waxay ka cabsadeen cibaadada aan la aqbali Eebe Ilaaha Qaadirka ah, sababtoo ah menyelisihi waxa loo baahan yahay by Nabiga sallallaahu 'wa.
Ha na siiso hay'ad samafal Fitr, markaasuu siin doonaa dadka saboolka ah nagu wareegsan, gaar ahaan dadka saboolka ah kuwaas oo wali ku jira waxaa ehelnimo nala halka inuusan ka mid ah kuwa aan nafkahi doonaan ahaa.
Waa caadi, haddii qof miskiin ah sadaqad u Fitr waxaa la siiyaa laba ama in ka badan ama taas bedelkeeda mid Fitr ajarkooda waxaa loo qaybiyaa laba dadka saboolka ah. Iyada oo ku saleysan taas, haddii uu jiro mid ka mid ah qoyska in sakada ururiya iyaga Fitriga oo waxaa la siiyey dadka saboolka ah, ka dibna waxa uu waxba ma. Haddii aan ku siin sakada mar kale isticmaalaan dadka qaata in uu bixiyo isaga iyo qoyskiisa sakada, ka dibna waxay sidoo kale waxba ma.
Dhammee, sako Fitr iidday ka hor salaadda maxaa yeelay waxay ahayd ugu fiican. Laakiin sidoo kale loo ogol yahay in ay soo saarto sakada Fitr ah maalin ama laba maalmood ka hor Iidda. Sidoo kale ma aha in la dhigo ilaa salaadda ka dib sakada Fitr iidda marka laga reebo sida waxaa udzur syar'i, sida wararka ee iidda u yimid si kedis ah oo aan la oggolaanayn isaga u soo saari hor Salaadda, waayo, wakhtigii waa mid aad u gaaban.
Markii aan goostay inaan ka soo baxdo iyo gacan sadaqo Fitr noo qof oo qofkaas ma aan helno halka salaadda lahaa in la hirgeliyo, markaa waa in aynu u siiyo qof kale. Yeynan lumin waqtigan! Haddii aannu ka go'an in ay u wareejiso qof gaar ah aan tixgelin doonna ugu mudan lakiin marnaba laga helay ninka, ka dibna waxaan ka codsan kartaa qofka kale si ay u matalaan qofka iyo sadaqooyinkaaga daranyihiin qof waxaan uga jeednaa haddii ay la kulmeen.
Cibaadada labaad waa Takbir cibaadada. Alle ayaa ku tilmaamay hadalkiisa:
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
oo waxaad noqon buuxsama uu tiro oo aad ku ammaani doonaan Eebe ku Hanuunsan idin siiyey, inaad mahadisaan [Al-Baqarah / 2: 185].
Markaas bertakbir naga dejisay leh:
الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله و الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد
Takbir lagu akhriyo aad ugaga by rag, laakiin haweenka waxaa Takbir waxaa loo sameeyaa aamusnaan.
Midda saddexaad waa Salaadda cibaadada. Si ay u fuliyaan cibaadada, Nabiga sallallaahu 'wa ayaa rag iyo haweenba in ay haweenka gabdhood oo bikrado ah oo astur iyo sidoo kale dadka aan haysan caado ah inuu ka tago guriga si ay u fuliyaan amar ku bixiyay. Waxa uu sallallaahu 'wa iyaga oo dhan ku amartay, oo ay ku jiraan haween kuwaasi oo caadada waxaa lagu amray in ay ka soo baxaan si ay u markhaati roonaanta iyo salaadda ee Muslimiinta ah. Haweenka waa caadada dhab ahaan waa in ay ka fogaadaan meeshii lagu tukan jiray, si aanay u fadhiisan in meel lagu tukado 'Id.
O Muslimiin! Inuu ku tukado iidda si aan u caabudo Eebe Ilaaha Qaadirka ah oo amar fulinta Nabiga sallallaahu 'wa iyo filan naxariis iyo salaadda ee Muslimiinta ka soo ragga iyo haweenka oo dhan aynu. Intee in le'eg oo wanaag shaaca ka qaaday Eebe Ilaaha Qaadirka ah oo sida badan diijabahi (siiyey) Eebe Qaadirka wakhtigaas salaadda.
Raggu waa ka soo baxaan ee nadiif ah iyo marsan barafuun iyo dharka ugu fiican ee ay xirto! Laakiin haweenka, ka soo baxdaa aan uunsi ornate oo la isticmaalayo.
Disunnahkan, Markase Salaadda la tago socod haddii aysan jirin udzur sida aan awoodin inaad u socotaan oo meel fog.
Ay ka mid yihiin dhaqanka sunnada isla maalintaas waa in la cuno ka hor inta uusan salaadda yar tahay iniinaha oo timir ah in tiro kisi ah; saddex, shan ama in ka badan. Anas bin Malik Radi anhu yiri:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا
Illeen Nabiga sallallaahu 'wa kama tegin maalinta Ciidul Fitriga in la cuno taariikhaha qaar ka mid ah oo la cuni tiro kisi ah. [Bukhaari]
Halkan waxaa ku qoran saddex disyari'atkan dipenghujung Caabuda Ramadan. Eebe Ilaaha Qaadirka ah ka hanuunsan taufiq noo dhan in la siiyo si ay u meel marin karo tan saddexaad cibaadada si fiican u May.
(Diadaftasi ee terminal ad-Lami Dhiyâ'ul Khutabil Jawâmi, rahimahullah Sheikh Muhammad ibn Saalax al-Utsamin 3 / 141-144)
[Guuriyeen ka magazine As-Sunnah Gaarka ah Edition (03-04) / Year XVIII / 1435H / 2014M. Published Lajnah Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo - Solo Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo 57 773 Tel. 0271-858197 Fax 0271-858196]
. Abu Daawuud, ma. 1609; Ibn Majah, ma. 1827. Dihasankan by Sheikh al-Albaaniya